I-Pinki Tunnel Apk Ukulanda Kwe-Android [VPN] - I-Luso Gamer
Ama-VPN athathwa njengamathuluzi aseshwa futhi alandwe kakhulu emhlabeni jikelele. Iningi lamathuluzi ayimfihlo afinyeleleka ku-inthanethi ayi-premium futhi adinga ukubhalisa. Kodwa lapha silethe lokhu okuthuthukisiwe kwamahhala ukulanda i-Pinki Tunnel.
Leli thuluzi le-Apk litholakala mahhala futhi alidingi ukubhalisa. Kodwa ukubhaliswa kuthathwa njengokudingekile futhi ngaphandle kwemininingwane yokungena, ukufinyelela izici ze-pro akunakwenzeka. Nakuba singakwazi ukubona noma iyiphi inkinobho yokubhalisa eqondile ngaphakathi.
Ngakho-ke labo abazimisele ukuhlola nokujabulela izici ze-premium zethuluzi. Kumelwe uxhumane nomlawuli kuqala usebenzisa ideshibhodi yokuxhumana. Futhi finyelela kalula izixhumanisi ezingapheli zeseva ezinamakheli ahlukene we-IP mahhala ngaphandle kokumosha isikhathi nezinsiza.
Iyini i-Pinki Tunnel Apk
I-Pinki Tunnel VPN iyithuluzi le-android elixhaswe yinkampani yangaphandle ehlanganiswe yiSunmoon Technologies. Inhloso yokuhlinzeka ngale nkundla entsha sha ukuhlinzeka ngomthombo wamahhala we-inthanethi. Lapho amalungu abhalisiwe angafinyelela kalula amaseva ahlukene uplink mahhala.
Umqondo wamathuluzi ephrothokholi ayimfihlo wavela ngemuva kokuthi abantu emhlabeni wonke beqala ukubhekana nezinkinga. Okufana nokuvinjwa kwamawebhusayithi, izinhlelo zokusebenza nezinkinga zokugebenga njll. Nakuba izinhlelo zokusebenza eziningi ze-android zingatholakali emhlabeni wonke.
Ngisho nalabo abaphumelele ukulanda lezo zinhlelo zokusebenza, ngokuhamba kwesikhathi bangakwazi ukufinyelela ideshibhodi eyinhloko. Ngoba lezo zinhlelo zokusebenza zikhawulelwe kumakheli e-IP wezwe. Ngakho manje ukufaka ithuluzi le-VPN kuzosiza kalula ukuthola amakheli e-IP wezwe elihlukile.
Futhi, izosiza ekuvuleni amaphrothokholi anomkhawulo ngokuthola Amakheli e-IP amazwe ahlukene. Ngakho-ke uyazithanda izici ze-pro i-VPN futhi bakulungele ukusizakala ngakho. Khona-ke usalindeni? Vele ulande uhlelo lokusebenza futhi ujabulele izici ze-premium.
Igama Umhubhe ophinki
Unjiniyela I-Sunmoon Technologies
Igama lephakheji com.tunnelguru.toofan.all
Uma sibheka esikhathini esedlule izindaba eziphathelene ne-inthanethi zazizincane kangangokuthi akekho owayecabanga ukugebenga imishini. Kodwa ngokuthuthuka kwezobuchwepheshe, ochwepheshe abaningi baqala ukucabanga ukunikeza abantu uhlelo oluthuthukisiwe lokuphepha.
Lokho ngeke kunciphise kuphela ithuba lokugebenga kodwa futhi kusize ekuqedeni izinkinga zokugebenga unomphela. Ngakho-ke ngokugxila kunhloso kanye namaphuzu abalulekile, abathuthukisi ekugcineni baphumelele ekuhleleni leli thuluzi elisha elibizwa nge-VPN.
Ukuhlanganisa uhlelo lokusebenza ngaphakathi kwe-smartphone ye-android ngeke kusize kuphela ekuvuleni amapulatifomu ahlukene avinjiwe. Kodwa futhi isiza abasebenzisi ekwenzeni uxhumano lwabo lwe-inthanethi luvikeleke futhi luqine. Yebo, ukunika amandla i-VPN App kuzosusa zonke izinkinga zokugebenga unomphela.
Inqubo yokufaka nokusetshenziswa kwesicelo ilula kakhulu. Okokuqala, sincoma ukuthi abasebenzisi be-android balande inguqulo yakamuva ye-Apk kusuka lapha. Manje yifake ngaphakathi kwe-smartphone ye-android futhi ufinyelele ikhasi eliyinhloko kuhlanganise nohlu lweseva.
Khetha noma yiziphi iziphakeli ezifinyelelekayo zokuqalisa uxhumano. Uma uxhumano selwakhiwe ngempumelelo, manje abasebenzisi be-android bangafinyelela kalula kuzo zonke izinkundla ezivinjiwe. Ngakho-ke uzimisele ukuhlola izici zochwepheshe zohlelo lokusebenza bese ufaka Ukulanda Kwe-Pinki Tunnel.
Kumahhala ukulanda i-Apk kusuka lapha.
Ukufaka uhlelo lokusebenza kunikeza ukufinyelela okuqondile kumaseva amaningi.
Ukukhetha noma yimaphi amaseva afinyelelekayo kuzosiza ukwakha uxhumano.
Lokho ekugcineni kusiza ekuvuleni amapulatifomu emingcele ahlukene.
Ngaphezu kwalokho, kuyasiza futhi ekuvikeleni uxhumano lwabo lwe-inthanethi.
Izikhangiso zezinkampani zangaphandle zivinjelwe.
Amaseva amazwe amaningi ayafinyeleleka.
Isivinini esincane sokuxhuma komuntu ngamunye ngu-1Gbps.
Ukuthuthwa kwe-GPS nakho kuyatholakala.
Ungalanda kanjani i-Pinki Tunnel VPN App
Okwamanje uhlelo lokusebenza luyafinyeleleka ukuze lufinyeleleke ku-Google Play Isitolo. Kodwa ihlukaniswe ngezigaba ezinemingcele. Okusho ukuthi abasebenzisi be-Android abakwazi ukufinyelela ifayela le-Apk eliqondile. Ngakho-ke yini okufanele abasebenzisi be-android benze esimweni esinjalo?
Ngakho-ke udidekile futhi usesha umthombo oyiqiniso oku-inthanethi wokulanda ifayela le-Apk. Kufanele uvakashele iwebhusayithi yethu futhi ulande inguqulo yakamuva yohlelo lokusebenza kusuka lapha. Vele uchofoze inkinobho yokuxhumanisa enikeziwe bese ulanda uhlelo lokusebenza kalula.
Ake sithi uma noma yiluphi uhlelo lokusebenza lufinyeleleka ukuze lufinyeleleke ku-Google Play Isitolo. Lokho kusho ukuthi ivikelekile ukuze ilandwe futhi ihlanzekile ukuyisebenzisa. Leli thuluzi elithile le-Apk liyafinyeleleka ku-Google Play Isitolo. Okusho ukuthi ivikelekile ukufaka nokusebenzisa. Ngisho nefayela lokuqala le-Apk liyafinyeleleka kusukela lapha futhi.
Sesivele sishicilele futhi sabelane ngenqwaba yamanye amathuluzi afanayo e-VPN lapha kuwebhusayithi yethu. Uma ungathanda ukuhlola lawo mathuluzi afanayo kufanele ulandele izixhumanisi. Okukhona DS Umhubhe Apk futhi I-ITIM VPN Apk.
Uma uhlangabezana nenkinga ngokweqisa uxhumano lwe-inthanethi oluvikelekile. Bese siphakamisa ukuthi ulande futhi ufake inguqulo ebuyekeziwe ye-Pinki Tunnel Apk. Lokho kuyafinyeleleka ukufinyelela kuwebhusayithi yethu ngokuchofoza okukodwa.
Izigaba Amathuluzi, Apps Amathegi Umhubhe ophinki, I-Pinki Tunnel Apk, Uhlelo lokusebenza lwe-Pinki Tunnel, Pinki Tunnel Download, i-VPN Imeyili kwemikhumbi